!! #ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ #အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ #သုံးသပ်ချက် | democracy for burma
tags: ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့, အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်, Bengali, Burma, Myanmar, PUSH & PULL factors, so-called Rohingya, UN, UNHCR Malaysia
( ၂ ) အလုပ်အကိုင်းရှားပါးမှု ။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု နင့် အဓိက နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အမျိုးသမိးနစ်ဦး၏ တဦးအပေါ်တဦး မုန်းတီးမှုကြိးမားခြင်း ၊ ညစ်ပတ်တိုက်ခိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြိးများကိုပါတိုက်ခိုက်လာသည့်အထိ လွန်ကဲလာမှုက ရင်းနီးမည့်အလုပ်များကိုကန်ထုတ်နေမှုကလည်း အဓိက တွန်းမောင်းကန်အားဖြစ်နေပြန်သည် ။
(၃) လူဦးရေများပြားလှသော်လည်း သားဆက်ခြားစီမံချက်ကိုပင်လက်မခံသော ဘာသာရေးယုံကြည်မှု( မကြာသောကာလကမှ ခွင့်ပြုခဲ့သည် ) နင့် ပညာမတတ်မှုကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နင့်အိမ်ထောင်ပြုမှုတို့ က ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့် ။
ဆွဲအား PULL ကလည်းအားကောင်းနေပါတယ် ။
( ၁ )UNHCR / Malaysia ၏မမျန်ကန်သောလုပ်ဆောင်နေမှု
မလေးရှားက UNHCR ကုလသမ္မဂဒုက္ခသည်မဟာမင်းကြိးရုံးက မလေးရှားရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီအကုန်နီးပါးကို ၉၅ % အထက်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်လက်မှတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ပေးတာက အဓိက ဆွဲငင်အားပါ ။ အဲဒီအထဲမှာ ပြည်တွင်းက ဗမာစကားဘဲတတ်ပြီး ဘင်္ဂါလီစကားမတတ်သော မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း..အောက်ပိုင်း အရပ်ရပ်က မွတ်စလင်တွေပါ ရီုဟင်ဂျာကုန်ကြပါတယ် ။
၂၀၀၅ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ကျနော်မလေးရှားရောက်ပြီး လကုန်ခါနီး ဒုက္ခသည်လျောက်တယ် ။ ၂ – ကြိမ်တိတိ လျောက်တာ လက်မခံပါ ။ ကျနော့်မှာ အကျဉ်းဦးစီးက ထောင်ထွက်လက်မှတ် ၊ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီ ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ ထောင်ထွက်လက်မှတ် ( နံပတ်တွေပါတယ် ) နင့် ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနင့်ထောင်ကျထားသူဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်ကဒ်ပြား ( နံပတ်ပါသည် ) ကိုတင်ပြလဲ ..ငါတို့လူသစ်လက်မခံသေးဘူးငြင်းပြီ; လိမ်လွှတ်တယ် ။ နေ့ တိုင်းတရက်ကို လူသစ် ( မှတ်ပုံတင်အသစ် ) ၁၅ ကနေ ၂၅ ယောက်လူသစ်လက်ခံနေတာ ဘာသာပြန်လုပ်နေသူတွေဆီကနေ သိနေရပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ဆက်ဆံရတာက မလေးရှားကုလားမတွေဘဲ ။ တတိယအကြိမ်ထပ်သွားတယ် ။ ပိတ်ထားတယ်လိမ်ပြောတော့ ကျနော်က ဘာသာပြန်တွေဆီက နေ့ စဉ်လူသစ်လက်ခံနေတယ်ထောက်တော့ ..တိုင်းရင်းသားတွေအလှဲ့၊ ဗမာတွေ မခေါ်သေးဘူးလိမ်ပြန်တယ် ။ အဲဒီမှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း နီပေါက ကျနော့်ကို ဘာပြဿနာလဲမေးတယ် ။ ကျနော်က ကဒ်ပြားတွေထုတ်ပြ ၊ ကုလားမလိမ်တာပြောပြတော့ သူ့ အထက်တာဝန်ခံလုံခြုံရေးကိုခေါ်ပေးတယ် ။
အဲဒီ နီပေါက ကျနော်တို့ ဒုက္ခသည်ရုံးရဲ့ခင်ဗျားလိုနိုင်ငံရေးအမှု ထိပ်ဆုံးဥိးစားပေး ဟုပြောပါတယ် ၊ အခုမဟုတ်တဲ့ လူလိမ်တွေကိုတော့ ဦးစားပေးနေတယ်။ တကယ်ပေးရမဲ့သူကျတော့ လိမ်ထုတ်နေတယ်ပြောပြီး ကျနော်ရဲ့ လက်မှတ်မိတ္တူတွေကို ပင်မရုံးကြိးဖက် ယူသွားတယ် ။ မိနစ် ၂၀-လောက်နေတော့ သူပြန်လာတယ်။ ပြင်သစ်တယောက်လိုက်လာပြီး ကျနော့်ကိုတွေ့ တယ်။ ခနနေတော့ ဟိုကုလားမက အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ ရာဇဝင်တွေကို လာမေးတယ် ။ လူတွေကြားမှာ မေးခွင့်လုံးဝမရှိ ။ နီပေါက လာကြည့်မှ ကျနော့်ကိုအထဲကိုခေါ်ပါတယ် ။
နောက် ၁-ပတ်နေ လာခဲ့ရန်ရက်ချိန်းပေးတယ် ။ မတ်လဆန်းပိုင်း ။ အဲဒီမှာ ပြင်သစ်တယောက်နဲ့ဖြေရတယ် ။ ပထမအဆင့် P- 1 ကဒ်ပြားထုတ်ပေးတယ် ။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြန်ချိန်းတယ် ။ တခါဖြေပြီးရင် တဆင့် တိုးပေးတယ် ။ အဆင့် ၆ ခုရှိတယ် ။ ၆ – ခုပြီးမှ RSD တတိယနိုင်ငံကို ခိုလှုံခွင့်အဆင့် သတ်မှတ်လက်မှတ် ( ကဒ်လေး ) ထုတ်ပေးပါတယ် ။ ထိုအဆင့်ရောက်ရန် ၂-နစ်မှ ၄ နစ်အထိကြာတတ်ပါတယ် ။ ( မှတ်ချက်- ထို ပထမအဆင့် ချိန်းလိုက်သော နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် မတိုင်မှီ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပါသည် ) ။
ထိုလက်မှတ်ရပြီးလျင်ပင် တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ က နောက်ထပ် ၂ နစ်ကနေ ၅ – နစ်လောက်ထပ်ကြာတတ်ပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ၃-နစ်ကနေ ၅ နစ်အထက်ကြာတတ်ပါတယ် ။
ကုလသမ္မဂ ဗဟို၏စီမံချက်မှာ ကျနော်တို့ လိုနိုင်ငံရေးထောင်ထွက်တွေက ဦးစားပေးပါ ။ မပေးပါ။ လက်ကိုမခံပါ ။ ရိုဟင်၈ျာအမည်သာတပ်ပါ ၊ လိမ်ပြောပါ ၊ ထိုသူတွေဆို P-1 အဆင့်ကိုကျော် ၂ ခါလောက်မေးပြီးရင် တန်းပြီး RSD ထုတ်ပေးတော့တာ ။
(၃) မလေးရှားအစိုးရ၏ မရီုသားသော ဆွဲဆောင်မှု ။
မလေးရှားအစိုးရကလဲ ယခင်က ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံသူများကို အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့်ရသူများ၏ အခွင့်အရေးနီးပါး ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ် ။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ပိုမိုကြိးထွားလာစေရန်ရွယ်တာပါ ။ ရိုဟင်ဂျာလက်မှတ်ကိုင်ထားသူတွေကို တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့် ၊ ကလေးကျောင်းထားခွင့် ၊ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခွင့်တွေ ပေးထားပါတယ် ။ ကျန်ဒုက္ခသည်တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါ ။ ခိုးလုပ်နေရပါသည် ။
(၄) ကုလဒုက္ခသည်မင်းကြိးရုံး၏ အထူးဆွဲဆောင်မှု Storng PULL factor
ဒုက္ခသည်မင်းကြိးရုံးက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို တလလျင် ရင်းဂစ် ၁၅၀ ထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်။ တခြားဘယ်ဒုက္ခသည်မှ ထိအခွင့်အရေးမရပါ။ ၂၀၀၆ မေလက စတင်ပြီး ထိုထောက်ပံ့ငွေတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ ဇွန်လ ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက ထိုသို့ ရပ်ဆိုင်းမှုကို ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ယူအင်အရာရှိတွေက ဒါအခွင့်အရေးမဟုတ် ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ အထူးအကူအညီသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ် ။ This is not your RIGHT, it is just the PRIVILEGE .လို့ ရှင်းပြပါတယ် ။ မရပါ။ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုူသူတွေ ယူအင်ရုံးကို ခဲတွေနဲ့ လာပေါက်လို့ရဲလုံခြုံရေး ခေါ်ယူရသည်အထိ ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာအရေး တောင်းဆိုနေသူတွေ ၊ သူတို့ က ဦးစားပေးသောကူညီမှုကို ရပ်တာတောင် ခဲနဲ့ လာထုတဲ့သူတွေပါ ။ မလေးရှားအစိုးရကလည်း မူလကပေးထားသောအထူးအခွင့်အရေးတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။
( ၅ ) ရိုဟင်ဂျာ ကိန်းဂဏန်းဖေါင်းပွမှု။
နောက်ပိုင်းက မြန်မာပြည်ကအလုပ်အကိုင်နဲ့ (ပတ်စ်ပို့ နင့်) ရောက်လာသူမွတ်စလင်များရော၊ အောက်လမ်းကလာသူမွတ်စလင်များကလည်း ရီုဟင်ဂျာဆိုပြီး ဒုက္ခသည်လိမ်လျှောက်ကြပါတယ်။
ဘုရာဖူးရင်း လိပ်ဥတူးရင်း။ အများစုက လိမ်လျောက်ကြတာဘဲ။ အရင်းမရှိ လှေထိုးလိုက်သလို ..ရိုဟင်ဂျာနေကြတာပါဘဲ။ နောက်ပိုင်း တတိယနိုင်ငံတွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ လက်ခံမိပြီး လက်လန်ကုန်ကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆုိုတာနင့် ကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် လက်မှတ်ကိုင်ထားသူတွေ ရွာလည်တော့တာပါဘဲ ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ လက်မခံချင်ကြတော့ဘူး။
ပတ်စပို့ နင့် အလုပ်လာလုပ်သူ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံသားတွေထဲကလည်း ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်သူတွေ တပုံကြိး။ နာမည်လိမ်တွေနင့် ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဆုံဖူးတာ အများကြိး။ အခုရိုဟင်ဂျာလက်မှတ်ကိုင်ဖူးသူ မြန်မာပြည်က ဗမာစကားတတ် ၊ ဘင်္ဂါလီစကားမတတ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်မနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ကုန်ကြတာ မနည်းတော့ဘူး။ မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်လက်မှတ်ကိုင် ရီုဟင်ဂျာ တသိန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ လက်မခံချင်သူတွေပါ။
အဲဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် အဝင်ဘဲရှိပြီး အထွက်မရှိတော့..ယနေ့သိန်းဂဏန်း အထိရောက်လာတော့တာပါ ။ ဒါတောင်မှတ်ပုံတင် (ကဒ် ) သက်တမ်းသွားမတိုးတာ့လို့စာရင်းပျက်သွားသူတွေ တပုံကြီး။
( ၅ ) ဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲရာကနေ လူကုန်ကူးသူများ၏ဈေးကွက်ကို မွေးထားမှု။
မလေးရှားမှာ လတ်ပေးလျင် အကုန်နီးပါးလုပ်ပေးပါတယ် ။ လူယောက် ဗွီဇာလွန်ကာနေထိုင်လျင်လည်း ထိုလူက မလေးရှားကနေ မထွက်ဘဲ ၊ သူ့ ပတ်ပို့ မှာ အထွက်တုံး၊ အဝင်တုံး အကုန်ထုပေးပါတယ် ။ လူဝင်မှတ်တမ်းမှာပါ အဝင်အထွက်ပြပေးတဲ့အထိ လုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံပါ ။ ဒါလောက်ဆို သဘောပေါက်တော့ ။
အဲဒါကြောင့် လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေကိစ္စ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေက တင်ပြနေတာ ၂၀၀၄ ခုနစ်ကထည်းက့ပါ ။ အခု ထိုင်းမှာမိတော့မှ..။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ပေါ်ကုန်တော့မှ လူကြားကောင်းအောင်လုပ်နေတာပါ ။
အဓိက အကြောင်းရင်းက မလေးရှား ၊ ထိုင်းတို့ ကဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေရပ်တည်ခွင့်ပေးထားတော့ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက လူကောင်းတွေကိုပါ အတင်းအကျပ်လူကုန်ကကူးနေတော့ ဘ၈င်္ါလီတွေကို ခေါ်တော့တာပါ ။
ဒါလဲ အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ PULL factor ပါ ။
မြန်မာအစိုးရ၏ တန်ပြန်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရွေ့ ကွက် ။
( ၆ ) ရိုဟင်ဂျာလို့ လိမ်ညာနေတာကို ပါးစပ်ပိတ်ပြစ်ရန် စီမံချက် ။
အခု မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို ကုလသမ္မဂစားရိတ်နင့် DNA စစ်ပေးရန်တောင်းဆိုရပါမည် ။ ဒါဟာ့အလွန်ထိရောက်ပြီး အရေးကြိးတယ်ဆိုတာကို စစ်ရေးအမြင်ရှိတဲ့ သမတကြိးနင့် နိုင်ငံရေးအကြံပေးများ သိပါလေရဲ့ လားမသိဘူး ။
အစကတည်းက သမိုင်းမရှိတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အာရပ်သဘောင်္ပျက်လို့အာရပ်လူမျိုးက ဆင်းသက်လာသူတွေဆိုထားတော့…သဘောင်္က ရခိုင်ကမ်းကိုလာတင်တယ်။ ရခိုင်ဘုရင်က နေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ လာတင်တာက အထီးတွေချည်းဘဲ။ အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုလျင် ဒေသခံရခုိုင်မိန်းမနဲ့ ဘဲ ကျရမှာ။ တစတစ ရခိုင်သွေးက ပိုပိုများလာရမှာပါ။ တစတစ အာရပ်သွေးရော့နည်းသွားရာကနေ ပပျောက်သွားရမှာပါ ။
ကနေ့တခြားမကြည့်ပါနင့် ။ အာရပ်သဘေ်ာပျက်က လာတင်တာက ဆယ်ဂဏန်းပေါ့ ။ အချိန်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နစ်တထောင်ဝန်းကျင် ။ သူတို့ နောက် အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျတာ အများကြိး ။ အထက်စီးကနေ နေတယ်။ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းစွာသွပ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ် ။
ဘိုကျောင်းတွေ ၊ ဘိုစကားတွေ ထားရစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားစာပေမှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတီထွင်မွေးစားနိုင်ခဲ့တယ် ။ လူတွေက ဘိုတွေကို အားကျခဲ့ရတယ် ။ နစ်တရာကျော်အုပ်ချုပ်သွားတယ်။ ကပြားတွေ အများကြိးထွန်းကားခဲ့တယ်။
ကျနော်အဖေလည်း ကပြား ၊ အင်္ဂလိပ်သွေး ၅၀% တဝက်ပါသူပါ။ အဖေကိုမွေးတာ ဒီနစ်မှာ အနစ် ( ၁၀၀ )တိတိပြည့်တယ် ။ အဖေ့မျိုးဆက် ယခုအဖေကနေစတွက်လျင် ၄ -ဆက်မြောက် ရောက်ပြီ။ မြစ်တွေရပြီ ။ အဖေကတော့ ဘိုရုပ်။ ကျနော်တို့ ကျတာ့ ဗမာမစစ်တာလောက်ဘဲ ပေါ်တော့တယ်။ ကျနော့်သား သမီးတွေ ဗမာမစစ်တာပေါ်သေးတယ်။ ကျနော့်မြေးတွေကျတော့ ဘိုရုပ် တစက်မှမရှိတော့။ အပြီးဗမာဘဲ။
ညီမောင် ဂျိုးရဲ့ မြေးတွေကျတော့ ဘိုသွေးပါတယ်တောင် မပြောရဲတော့ဘူး။ တူမတွေကမွေးတာတွေ ဘိုသွေးပါပါတယ်ပြောလျင် ဘယ်သူမှ လက်မခံနိုင်တော့တဲ့ ရုပ်ဖြစ်သွားပြီ ။ ဘိုသွေးပြောလျင် ကောင်းကောင်းအဟားခံရပါမည်။
ဒါတောင် သင်္ချနည်းအရ ထိုအဖေ၏မြစ်ဖြစ်သူတွေမှာ အင်္ဂလိပ်သွေးက ၆ % ( 6.0% ) ပါနေသေးသည် ။
အဲဒီတော့ အနစ် ၁၀၀ အရောက်မှာ ကျနော်တို့ က ဘိုမျိုးဆက်ပါ မပြောရဲတော့တာ..ကို အနစ် ၁၀၀၀ လူတွေက အာရပ်မျိုးဆက်တွေပါ အော်နေတာ ပြောနေတာ..ချင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ ။ သူတို့ သွေးထဲ အာရပ်သွေးပါလှ. ..( 0.0001 % )ဘဲကျန်တော့မည် ။ သူတို့ က အသက် ၉ နစ်ဆို လင်ယူကြရပြီဆိုတော့ အနစ် ၁၀၀ မှာ မျိုးဆက် ၈ ၊ ၁၀-ဆက် ဆက်လောက်ရောက်နေတာနော် ။ မျိုးဆက် ၈-ဆက်နင့်တွက်လျင်ပင် အနစ်၁၀၀ မှာတင် အာရပ်သွေးက ..( 0.75 % ) ။ 1-% ပင်မရှိတော့ပါ ။
အခု အဲဒီရိုဟင်ဂျာလို့ ကြွေးကျော်နေသူတွေကိုသာ DNA စစ်ဖို့ ခေါ်လိုက်ပါ။ အာရပ်သွေးမပေါလျင်၊ ရခိုင်သွေးမပါလျင် ဘင်္ဂလားပြန်ပို့ မည်ကိုလက်ခံပါမည်ဟု သဘောတူပါ သည်ဟုသာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါ။ သွေးစစ်မယ်ခေါ်လိုက်လျင်..ဘယ်အကောင်မှ ထွက်လာရဲမည်မဟုတ်တာကို ရဲရဲင်္ကြီး ကျနော်အာမခံပါတယ်။ သွေးစစ်လဲ ပြန်မပို့ လျင်တော့ ..မတွေ့ လဲ ဘာအရှုံးရှိတာမှတ်လို့ငါးမရရေချိုးပြန်မည့်သူတွေ ထွက်လာပါဦးမည်။
အာရပ်သွေးနင့် ရခိုင်သွေး များများမပါလျင် ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ပြန်ပို့ မည်ကို သဘောတူကြောင်းသာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါ။ လာရဲသူမရှိစေရပါဘူး ။
ရခိုင်ရှိ နိုင်ငံသားအဆက်များနင့် DNA တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ။ ကျနော်တို့ က အထက်စီးရမည့် အချက်ကို သမတအကြံပေးများ မမြင်ကြတာလား။ ပညာရှင်များနင့် တိုင်ပင်ကြစေလိုပါသည်။
DNA စစ်ရေးစကားဟလိုက်လျင် ထိုကုလသမ္မဂ မစ္စတာဘန် ပါးစပ်ပိတ်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ။ သူက ပညာရှင်ဘဲ ၊ ဒီစကားဟလိုက်လျင် သူတို့ ကစားကွက်ကုန်သွားပြီဆိုတာ တန်းသိတာပေါ့။
( ၂ ) ဒုတိယအချက်အနေနင့် ထိုရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံရေး
ဒုက္ခသည် အသိအမှတ်ပြုနေတာကို ရပ်တန့် ထားပေးရန် တောင်းဆိုရပါမည်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလျင် ထိုအသိအမှတ်ပြုသူများ အဆုံးအထိ တာဝန်ယူရန်တောင်းဆိုရပါမည်။ ပါးစပ်ဖျားလှုပ်ရုံလေး သက်သက်ကိုရပ်တန့် ရန်တောင်းဆိုရပါမည် ။
( ၃ ) ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ၏ အဖိုးအဖွားများ၏ မျိုးဆက်ကို DNA ဖြင့်ခြေရာကောက်ရန် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ မျိုးဆက်ကို ထောက်ပြရန် မတောင်းဆိုနေသမျှ ဒီကုလိမ်တွေက ဆက်လိမ်နေဦးမည်သာ။
ဒုက္ခသည်မင်းကြိးရုံးက ရိုဟင်ဂျားများ၏ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဇစ်မြစ်ကို စီစစ်ရန်တောင်းဆိုရပါမည် ။ အများစုဟာ ဗြောင်လိမ် ၊ တွေ့ ကရာ..တခြားသူသင်ပေးတာတွေအကုန်ထွက်ဆိုထားတာပါ ။ ယူအင်ရုံးမှာကို သူကိုယ်တိုင်ပထမ ထွက်ဆိုချက်ကို မေ့နေသူ မှားပြောနေသူတွေထုနဲ့ဒေးပါ ။
ယူအန်ရုံးက စီစစ်လျှင် ပထမ လူတွေ့ တွေမှာသူတို့ ဘာတွေလိမ်ထားမိတယ်တောင် မမှတ်မိသူတွေ တဝက်ကျော်ရှိနေပါမယ် ဒါကိုရဲရဲကြိးဆုပ်ကိုင်ထားလို့ ရပါတယ် ။
ကျနော်မြင်သလောက်ပါ၊ဆက်လက်စဉ်းစားပြီး ဆက်လက်တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးစားပါဦးမည် ။
ရိုဟင်ဂျာလို့ လိမ်နေသူတွေကို လိမ်နေမှန်းသိသိကြိးနင့် ရပ်တည်ပေးမှုဟာ လူကြိးလူကောင်းများမလုပ်သင့်ကြောင်း အစိုးရမှ ခပ်မာမာသတိပေးရန် ။ ရိုဟင်ဂျာအလိမ်ပေါ်လာလျင် လူကြိးလူကောင်းပီပီ တာဝန်ရှိရှိမှားကြောင်းဝန်ခံပေးရန်တောင်းဆိုပြီး ကုလသမ္မဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ကိုပါ စိန်ခေါ်လိုက်ပါရန်။
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် cr. Demo Wai Yan
from → BENGALI, Burma, MYANMAR, UNHCR / Malaysia
← !! #“တောင်ကြီးသားတွေ ကံဖယ်ပေလို့ပေါ့” #BOMBS #HANDMADE #FOUND
!! #ကုလားရှိရင် မုဒိမ်းရှိမယ်(၉)” #U #WIRATHU →